Cross Hotels & Resorts dia manambara CEO vaovao
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Cross Hotels & Resorts dia manambara CEO vaovao
Harry Thaliwal voatendry ho CEO an'ny Cross Hotels & Resorts
Harry Thaliwal dia nasandratra ho mpitarika ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Cross Hotels & Resorts
Ny fandraisana an-tanana ny fanapaha-kevitry ny orinasa mandritra ny fotoana sarotra indrindra amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana sy ny fandraisam-bahiny manerantany dia sarotra ho an'ny sahirana.
Nandritra izay 12 volana lasa izay, Cross Hotel & Resorts dia nanjary hetsika fivelomana satria napetraka ny fototra ho an'ny fitomboana ho avy
Ny orinasam-pitantanana fandraisam-bahiny Cross Hotels & Resorts dia faly nanambara fa i Harry Thaliwal dia nasandratra ho andraikitry ny Chief Executive Officer izay manan-kery eo noho eo. Fampiroboroboana anaty ho an'ny indostria maestro malaza indrindra i Harry, dia malaza amin'ny fisainana manelingelina izay niteraka hatrany ny famoronana sy ny fanavaozana manerana ny sehatry ny orinasa. Asa iray miorina amin'ny foto-kevitra fahitana, izy dia voafintina indrindra amin'ny fahaizany manova orinasa amin'ny alàlan'ny tanjona sy ny fanomezam-pahefana ny mpiasa.
Ny fakana ny volo amin'ny orinasa mitombo haingana mandritra ny fotoana sarotra indrindra amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana sy ny fandraisam-bahiny manerantany dia sarotra ho an'ny olona kivy, fa i Harry kosa dia efa namory ny ekipany mpanatanteraka mazoto ary mitarika ny fiampangana avy eo aloha. Nandritra izay 12 volana lasa izay, Cross Hotels & Resorts Nanjary toetsan'ny hetsika iray satria napetraka ny fototra ho an'ny fitomboana ho avy raha vao miverina amin'ny ara-dalàna ny fifehezana ny sisintany iraisampirenena. Notsongaina tamin'ny alàlan'ny fomba hafa sy mavitrika amin'ny fampidirana azy ara-tsosialy ao amin'ny tsena iasany, ny orinasa mifantoka amin'ny mpanjifa dia manana fanambarana lehibe ao amin'ny fantsona.
“Raha ny tena izy, ny fifantohako dia ny fampitomboana ny orinasa. Mino aho fa manana olona marina sy paikady hitondra ny orinasa any amin'ny sehatra manaraka isika. Izahay dia mijery ny fanindriana ny fetran'ny fomban-drazana any Azia atsimo atsinanana sy ny fandehanana any ivelany. Raha nampianatra antsika na inona na inona io krizy io dia ny fahaizany mandanjalanja. Avy amin'io fomba fijery io dia afaka manamboatra haingana ny safidy vaovao sy vahaolana vaovao mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay mety ho tompony isika izao, "hoy i Harry.
“Tsy azo ihodivirana ny fiverenan'ny dia iraisam-pirenena fa lalao vinavina ny hamaritana ny ora voafaritra tsara. Anisan'ny asanay ny manoratra toko vaovao ho an'ny sehatry ny fandraisam-bahiny ary izany indrindra no nataonay. Rehefa miverina ny dia iraisam-pirenena dia ho vonona izahay. Raha mankafy ny vokatry ny fahombiazana ny Cross Hotels & Resorts sy ireo mpiara-miombon'antoka aminay, dia tsy miantehitra amin'ny tombotsoanay velively izahay ary manosika mandrakariva ny valopy amin'izay azo tratrarina. Miara-miasa akaiky amin'ny ekipako izahay, efa nandamina tsara ny fototr'ireo orinasantsika izahay, izay azoko antoka fa hampiavaka anay amin'ny fifaninanana. Ny fandraisana fanapahan-kevitra haingana sy haingana dia zava-dehibe amin'ny tontolon'ny fandraharahana 'ara-dalàna' vaovao ary kasaiko ny hamolavola paikady izay tsy hanome lanja ho an'ireo mpiray antoka amintsika ihany fa hanamafy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Cross Hotels & Resorts. ”
Mikasika ny pasipaoro COVID-19 sy ireo antontan-taratasy coronavirus hafa izay namboarina ho fomba haingana hanovozana aina eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny manerantany dia nilaza i Harry fa ny Cross Hotels & Resorts dia hanaraka ny torolàlana napetraky ny governemanta ao amin'ny firenena misy ilay orinasa. manana fanatrehana. Tanjona iray hananganana fahatokisan'ny mpandeha fa ny marika marika Cross, Cross Vibe ary Away, ny mpitantana hotely sy ny ekipany natokana dia manohy manatanteraka fitsipika henjana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ary ny paikady fanadiovana be loatra mba hiantohana ny fitohizan'ny fiarovana ny vahiny.
“Ny mpiara-miombon'antoka amintsika dia mahatakatra ny fahaizany mivelona sy ny fahafaha-manao misy amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mavitrika ary miaiky izahay fa tsy mivarotra azy ireo fifanarahana fitantanana hotely na franchise vaovao. Tena faly izy ireo ny amin'ny haren'ny safidy, ny tombony ary ny sosokevitra omena lanja entintsika eo ambony latabatra ary ekentsika ny hafainganam-pandehanay sy ny hakingantsika hamaha ny fepetra takian'ny orinasa marolafy. Manampy hatrany ny lanjanay ho an'ny mpiara-miasa sy ny indostria izahay, na dia eo aza ny flipside dia tsy manalefaka ny fahafaha-manaontsika. Ny haingam-pandeha amin'ny tsena dia ho singa lehibe indrindra rehefa tonga ny sidina. ”
"Ny fitomboana amin'ny ho avy no lohalaharana ary laharam-pahamehana eo fa eo ihany koa ny fampahafantarana ireo mpiara-miombon'antoka amintsika fa mbola misy ny fomba voalanjalanja amin'ny maodelinay momba ny asa aman-draharaha. Ny tsirairay dia niaina zava-tsarotra tao anatin'ny 12 volana lasa ary tsy maintsy nanao sorona izahay. Manohy miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay izahay ary manohana ny olonay amin'ny fahalalana sy ny fampandrosoana ho an'ny mpiasa hitondra azy ireo amin'ny dingana manaraka amin'ny asany ary koa mamorona programa maharitra momba ny asa sosialy maharitra (CSR). Ny tanjonay dia ny ho mpiambina ny tontolo iainana sy ny vondrom-piarahamonina misy ny trano fandraisam-bahiny sy hotely misy antsika. Amin'ny alàlan'ny fananganana tamba-jotra ny rafitra ara-tontolo iainana maharitra ao anatin'ny fananantsika dia afaka mampihena ny fiatraikany ara-tsosialy isika eo am-pijinjana ny tombony azo avy amin'ny fifamatorana mifamatotra amin'ny natiora sy ny olona, ​​"hoy izy.
Zanzibar dia nanambara ny kaody tsy maintsy arahin'ireo mpizahatany